ကိုရိုနာဂယက်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အရေးပေါ်ရံပုံငွေ ဗဟိုအစိုးရ ချမှတ်မှုမရှိသေး
ကိုရိုနာဂယက်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင...
15 มี.ค. 2563 - 01:28 น.
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်ကြောင့် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတွေ စတင်ထိခိုက်လာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အဆိုးရွားဆုံး ထိခိုက်တာကတော့ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
CMP အတည်ချုပ် လုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်သမား သိန်းနဲ့ချီ ရှိနေပြီး အများစုက အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေတော့ ကုန်ကြမ်း အဝင်နှေးမှု ၊ ကုန်ကြမ်းရရင်လည်း နောက်ထပ် ဝယ်သူတွေ ရှိပါ့မလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ကြီးထွားလာနေတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် တချို့ စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်သမား လျှော့ချင်တာ ၊ အလုပ်ထုတ်ပစ်တာ စတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အကြံပြု တင်ပြလာနေပြီး လက်ရှိ စက်ရုံ ၂၀ လောက် ပိတ်ဖို့ စတင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အတွက် အလုပ်သမား ၈ဝဝဝ လောက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားတော့မယ့် အရေးဆိုက်နေပြီလို့ ဝန်ကြီး က ပြောပါတယ်။
ဒုတိယ ထိခိုက်မှု အများဆုံးကတော့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းက စျေးသည် ၊ ခရီးသွား လမ်းညွှန်တွေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပြီး တရုတ်ကို ပို့နေတဲ့ ကျွဲနွှားနဲ့ ရေထွက်ကုန် လုပ်ငန်း ပြောင်းစျေးကွက်တွေဟာ လတ်တလော ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာ သန်းမြင့်က ဆိုပါတယ်။
အခွန်လျှော့မလား ၊ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မလား
လာမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်း UMFCCI ကုန်သည် စက်မှု အသင်းချုပ် ၊ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန နဲ့ ဟိုတယ် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီး ဌာန တို့နဲ့ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုပြီး ဘယ်ကဏ္ဍ အထိခိုက်ဆုံးလဲ ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကာ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာ သန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဘယ်နေရာမှာ အထိခိုက်ဆုံးလဲ ဘယ်လုပ်ငန်းတွေကို ဖြေလျှော့ ပေးနိုင်မလဲ ၊ အဲလို ဖြေလျှော့ ရာမှာ အခွန်လျှော့ မလား ၊ ငွေကြေး အထောက်အပံ့တွေပေးမလား ၊ နစ်နာသွားတဲ့ လုပ်သားတွေကို ရသင့်ရထိုက်တာတွေ ဘယ်လို ပေးမလဲ ဆိုတာတွေကို တွက်ချက် လျက် ရှိတယ်လို့ ဝန်ကြီးက ရှင်းပြပါတယ်။
အရေးပေါ် ရံပုံငွေ ဗဟိုအစိုးရက မချမှတ်ပေး
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သက်ရောက်မှုတွေ အပေါ် ကုစား ဖြေရှင်းပေးဖို့ ဗဟို အစိုးရ အနေနဲ့ အခု လတ်တလောမှာ အရေးပေါ် ရံပုံငွေ ချမှတ်ပေးတာမျိုး မရှိသေး ပေမယ့် ဖြစ်လာရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲ ဘတ်ဂျက် တောင်းရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီကိစ္စတွေကို စီမံ ဘဏ္ဍာ ကရော ဗဟိုဘဏ် ကပါ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနတွေနဲ့ ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင် လျက်ရှိတယ်လို့ စီးပွားရေး ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ထိခိုက် နစ်နာမှု ရှိလာမယ့် အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းလေးတွေကို အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးဖို့ ကိစ္စကို စဉ်းစားလျက် ရှိပြီး ကုန်သည် စက်မှု အသင်းနဲ့ ဆွေးနွေးကာ နောက်ဆုံး ရလဒ်ကို လာမယ့် တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်း ကြေညာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဒေါက်တာ သန်းမြင့်က ဆိုပါတယ်။
လုပ်ငန်း စက်ရုံ ပိတ်မှုတွေကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာ အပေါ် လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးကာ ဘယ်လို ရပ်ဆိုင်းရင် အသက်သာဆုံး ဖြစ်မလဲ ၊ သူတို့ကို ဘယ်လို ကူညီ ပံ့ပိုး ပေးနိုင်မလဲ ၊ ယာယီ ရပ်နားစရိတ် ပေးမလား ၊ ခွင့် ပေးမလား ၊ လူမှုရေး ရံပုံငွေ ကနေ ဘယ်လို ပံ့ပိုး နိုင်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း တွက်ချက်လျက် ရှိတယ်လို့ ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် စဉ်းစား ထားတာကတော့ အစိုးရ ဌာနတွေမှာ Public Work လို ဟာမျိုး အစိုးရ ဘတ်ဂျက် က သွားတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး တို့မှာ ရံပုံငွေတွေ ချပြီး အများ အလုပ် လုပ်နိုင်မယ့် အလုပ်အကိုင်သစ် တွေ ဖန်တီးနိုင်မယ့် စီမံကိန်းမျိုးတွေကို စဉ်းစားလျက် ရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာ သန်းမြင့်က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ရှိ တင်ပြထားတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အဆိုပြုလွှာတွေကို အမြန်ဆုံး အတည်ပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ၀န်ကြီးက ပြောပါတယ်။
မတ်လ ၁၃ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ COVID 19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး အမျိုးသား အဆင့် ဗဟိုကော်မတီ အောက်မှာ ရှိတဲ့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့မှာ မတ်လ ၁၄ရက် မနက်က ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများကို ဘက်စုံ ထောင့်စုံက စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အစီအမံတွေကို ကုစားရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ညှိနှိုင်း ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ နိုင်ငံခြား စီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတန်း အတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောပါတယ်။
မကြာခင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သက်ရောက်မှုတွေကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အစိုးရဖက်က ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ၊ တခါ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းကာ ဘယ်လို ဖြေရှင်း နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ကုစားရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး က ဆိုပါတယ်။
အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လို ကယ်တင်မလဲ
လက်ရှိ CMP အတည်ချုပ် စက်ရုံတွေမှာ ကုန်ကြမ်း ပြတ်လပ်မှု ပြဿနာ ဆိုးရွားနေတဲ့ အတွက် ဒါကို ဘယ်လို ဝိုင်းကူမလဲ ၊ ဘယ်လို ပေါင်းလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရေတို အနေနဲ့ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ချောမွေ့ဖို့ ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံခြား စီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတန်း အတွင်းဝန် က ပြောပါတယ်။
ရေရှည် အနေနဲ့တော့ ဒီလို အထည်ချုပ် စက်ရုံတွေမှာ ကုန်ကြမ်းကို တရုတ်က တင်သွင်းရတာ ဖြစ်ပြီး ဒါမျိုး ပြဿနာ နောင်လဲ ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အတွင်းမှာ Supply Chain လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလျက် ရှိတယ်လို့ ဦးအောင်နိုင်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နောက်ဆက်တွဲကို ဖြေရှင်းမယ့်ကော်မတီ ဖွဲ့ဖို့ အစိုးရကို တောင်းဆို
လတ်တလော ဗဟိုဘဏ်က အတိုးနှုန်းတွေကို ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ကုစားဖို့ ရည်ရွယ်ကာ ဒီကိစ္စကိုဆိုင်းငံ့မနေဘဲ ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဦးအောင်နိုင်ဦးက ရှင်းပြ ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ အနေနဲ့ လက်ရှိ အချိန်မှာ နိုင်ငံ တကာ အကူအညီ ရယူဖို့ ကိစ္စကို စဉ်းစားဖို့ အဆင့်အထိ မရောက်သေးဘဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ အင်အားနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ကုစားရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဂယက်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အရေးပေါ်ရံပုံငွေ ဗဟိုအစိုးရ ချမှတ်မှုမရှိသေး